Umoya woLwandle - I-Airbnb
Indlu enevaranda yonke sinombuki zindwendwe onguKaren
Igumbi elimnandi elivaliweyo elineembono ze-Isle of Skye. Ibekwe ngokugqibeleleyo ukutyelela iziqithi ezincinci ze-Eigg, iRhum, iMuck okanye iCanna. Ukuhamba umgama ukuya kwisiqithi saseSkye Ferry nokuba ngumkhweli wosuku okanye ukuwela imoto. Ilungele ukujonga izilwanyana zasendle, iilwandle ezintle ezinesanti, kunye netrout emnandi iLochs.
I-Sea Breeze yeyona ndawo ifanelekileyo yokubaleka. Imizuzu engamashumi amahlanu ukusuka eFort William, kwikomkhulu langaphandle lase-UK kwibhayisekile yeentaba okanye ukutyibiliza inqanawa. Indawo efanelekileyo kwiintsapho ezihambayo okanye iqela labahlobo. Indlu yethu yokulala eyi-3 ingalala abantu abayi-6 enebhedi ephindwe kabini kumagumbi ayi-2 kunye negumbi lesithathu lokulala ziibhedi ezi-2 zomntu omnye.
Indawo yokupaka enendawo yokuhlala iimoto ezi-3. I-WiFi yasimahla kunye ne-Sky tv kunye neNetflix kuwo omabini amagumbi okuhlala kunye namagumbi okulala. Imidlalo ebonelelwe ngobusuku bentsapho kunye nomatshini wekofu kubathandi bekofu! Ngeembono zePanoramic ukuya eSkye kunye neziqithi ezincinci le yeyona ndawo ifanelekileyo yokubuyela kwizibini kunye neentsapho :)
I-Sea Breeze luhambo lwemizuzu eli-10 ukuya elalini
UKaren noDavid baya kudibana neendwendwe zabo ukuze baqinisekise ukuba bonwabile kwaye ukuba kukho nantoni na efunekayo ukwenza iholide yabo ibe yinto ekhunjulwayo, sinolwazi lwendawo kwaye sinokukunceda kulo naluphi na uhambo ocinga ukulucwangcisa kwiilwandle okanye ukuloba, Qhagamshelana nam kwaye cela iingcebiso zohambo phambi kokuba ubhukishe ukuba kuyimfuneko
UKaren noDavid baya kudibana neendwendwe zabo ukuze baqinisekise ukuba bonwabile kwaye ukuba kukho nantoni na efunekayo ukwenza iholide yabo ibe yinto ekhunjulwayo, sinolwazi lwend…